MediaLight Mk2 Flex CRI 98 6500K White Bias Lighting - MediaLight ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
ပင်မစာမျက်နှာ MediaLight Mk2 Flex CRI 98 6500K အဖြူရောင်ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်
by MediaLight Mk2 စီးရီး
မူကွဲတစ်ခုကိုရွေးပါ 1 မီတာ (နေကြတ်ခြင်း) / ပါဝင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မီးမှိန်စက် - $39.95 1 မီတာ (နေကြတ်ခြင်း) / MagicHome WiFi မှိန်စက် (+$8.95) - $42.952မီတာ / ပါဝင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် - $59.952မီတာ / MagicHome WiFi အမှိန်စက် (+$8.95) - $68.903မီတာ / ပါဝင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် - $69.953မီတာ / MagicHome WiFi အမှိန်စက် (+$8.95) - $78.904မီတာ / ပါဝင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် - $79.954မီတာ / MagicHome WiFi အမှိန်စက် (+$8.95) - $88.905မီတာ / ပါဝင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် - $89.955မီတာ / MagicHome WiFi အမှိန်စက် (+$8.95) - $98.906မီတာ / ပါဝင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် - $99.956မီတာ / MagicHome WiFi အမှိန်စက် (+$8.95) - $108.90
1 မီတာ (နေကြတ်)2မီတာ3မီတာ4မီတာ5မီတာ6မီတာ
အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် ပါဝင်ပါသည်။ MagicHome WiFi မှိန်စက် (+၈.၉၅ ဒေါ်လာ)
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ 1 Meter Flex သည် 1 Meter Flex နှင့် တူညီပါသည်။ ထပ်နေသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၎င်းကို အဝေးထိန်းခလုတ်ရွေးချယ်မှုများဖြင့် ဤစာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လာမည့်လများစွာအတွင်း ထုတ်ကုန်နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းမည်ဖြစ်သည်။ အဝေးထိန်းကိရိယာမပါဘဲ Eclipse ကိုသင်ဝယ်နိုင်သည်။ ဒီမှာ.
အရောင် - ဝေဖန်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်
MediaLight Mk2 Flex ဖြင့်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်သည်တိကျမှုရှိမရှိကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲသင်၏ TV ပေါ်မှရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျတဲ့ simulated ကိုစမ်းသပ်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တယ် အဖြူရောင် D65 ဘက်လိုက်မှုရှိသောအလင်းသည် Imaging Science Foundation မှအသိအမှတ်ပြုပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပညာရှင်များမှအသုံးပြုသည်။
Mk2 သည်အလွန်မြင့်မားသော CRI နှင့်အရောင်အပူချိန်တိကျမှုများကို USB ပါဝါ LED ဘက်လိုက်မှုအလင်းရောင်စနစ်၏အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုနှင့်သယ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အရောင်တည်ငြိမ်သည့်မှိန်မှိန်နှင့်ချက်ချင်းနွေးထွေးမှုကသင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်အလင်းသည်အမြဲတမ်းပစ်မှတ်ထားနေစေရန်သေချာစေသည်။
မှောင်မိုက်၌အသက်ရှင် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတီဗီကြည့်) ရပ်တန့်ဖို့အချိန်ပဲ!
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် MediaLight Mk2 Flex အဲဒါကိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်အတိအကျအဖြစ်အလုပ်လုပ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို CalMAN နဲ့ i1Pro2 Spectrometer နဲ့တိုင်းတာပြီး D65 အဖြူရောင်အမှတ်အသားမှာမှန်ပြီးအကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်တန်းတုန့်ပြန်မှု ငါယနေ့အထိတိုင်းတာကြပါပြီမည်သည့်အလင်း။"
- ခရစ် Heinonen, ရည်ညွှန်းမူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ
MediaLight Mk2 ထူးခြားချက်များ:
•မြင့်မားသောတိကျမှု 6500K CCT (ဆက်စပ်အရောင်အပူချိန်)
•အရောင်တင်ဆက်မှုအညွှန်း (CRI) ≥ 98 Ra (TLCI 99)
•5v USB 3.0 (900mA သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း) ၅-၆ မီတာအတွက်အသုံးပြုသည်
•5v USB 2.0 (500mA သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း) ၁-၄ မီတာ (၅၀၀mA အောက်) သို့ USB 1 မှ ၅-၆ မီတာ (၅၀၀mA ထက်ကြီးသော) အတွက် USB4ကိုသုံးပါ
•အနီအောက်ရောင်ခြည် PWM မှိန်မှိန်နှင့်အဝေးထိန်းစနစ် (IR blaster တပ်ဆင်ထားသော universal remotes များနှင့်စမတ်အချက်အချာများနှင့်တွဲဖက်သုံးနိုင်သည်)
• 3M VHB mounting ကော်စစ်စစ်ကိုအခွံခွာပြီးကပ်ပါ
• USA Adapter ပါ ၀ င်သည် (USB 3.0 port တစ်ခုတီဗီတွင်ရရှိလျှင်မလိုအပ်ပါ)
• 0.5m extension ပါဝင်သည်
• ၅ နှစ်အကန့်အသတ်အာမခံ
• High Dynamic Range (HDR) အပါအ ၀ င် display အားလုံးအတွက်အကြံပြုသည်။
တိုတောင်းသောဖွဲ့စည်းပုံသည် 1"အထိ ကွန်ပျူတာမော်နီတာဖြင့် 46m Eclipse အတွက် အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ သေးငယ်သော display တွင်၊ ကွဲပြားသောဘက်ခြမ်းမှအလင်းများသည် display ကို stand တစ်ခုပေါ်တွင်ထားသောအခါ ပို၍အညီအမျှပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဒါကြောင့်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးက ကွန်ပြူတာ မော်နီတာရဲ့ အောက်ခြေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အလင်းရောင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက် နှစ်ဖက်ဟာ ပိုကြီးတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အလွန်နီးကပ်နေပါသေးတယ်။
4.9 450 ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ.
လုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ်… အချိန်ယူပါ။ ငါ့ဟာကြီးထွက်လာတယ်။
၂ မီတာ / MagicHome WiFi မှိန်သွားအောင် (+ $ ၈.၉၅)
တပ်ဆင်ရတာ လွယ်ပါတယ်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်၏ TV ၏ USB အပေါက်တွင် ချိတ်လိုက်သည်နှင့် ၎င်းသည် အစုံလိုက်ဖြင့် အဖွင့်အပိတ် ထွက်လာပါသည်။ ပိုမပျော်နိုင်တော့ဘူး!
5 မီတာ / အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မှိန်စက် ပါဝင်ပါသည်။
Amazon အဆင့် ပံ့ပိုးမှု
ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် သင်အမြဲတမ်း ပံ့ပိုးကူညီမှုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ အဖွဲ့ဟာ သင်နဲ့ အမြဲလက်တွဲပြီး ဒီပြဿနာကို အစောဆုံးဖြေရှင်းဖို့ ဆန္ဒရှိနေမှာပါ။
ခြားနားချက်ကို အံ့သြမိသည် ။
၈၅ လက်မ Sony TV တွင် တပ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဒီဘက်လိုက်အလင်းရောင်စနစ်ရဲ့ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကို အံ့သြမိပါတယ်။ 85% ပြန်ဝယ်ပါလား။
၂ မီတာ / မရှိ
နေ့ခင်းဘက်မှာတောင် အလုပ်အရမ်းလုပ်တယ်။ ဘက်လိုက်အလင်းရောင်ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ အရောင်များသည် ပိုမိုတောက်ပနေပါသည်။
4 မီတာ / အနီအောက်ရောင်ခြည်အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် မှိန်စက်ပါရှိသည်။